MPT Myanmar | Moving Myanmar Forwarde-Invoice Registration-mm - MPT Myanmar | Moving Myanmar Forward
လစဉ်ဘေလ်ပေးဆောင်သူများအတွက် MPT မှ E-invoice အား စတင် မိတ်ဆက်လိုက်ပါပြီ။
E-invoice သည် လစဉ် ပေးပို့နေသော ငွေတောင်းခံလွှာများအား ပိုမို အဆင်ပြေ ချောမွေ့စွာ လက်ခံ ရရှိနိုင်ရန်အတွက် SMS နှင့် Email မှ တဆင့် ပေးပို့ခြင်း ဖြစ်ပါသည်။
လစဉ်ငွေတောင်းခံလွှာ လက်ခံရရှိသော Postpaid service (PSTN, ADSL, GSM, CDMA, IPStar)နှင့် FTTH သုံးစွဲသူများအားလုံးသည် E-invoice အစီအစဉ်တွင် ဝန်ဆောင်ခ ထပ်မံပေးဆောင်ရန် မလိုဘဲ ပါဝင် လျောက်ထား နိုင်ပါသည်။
E-invoice ရဲ့ အားသာချက်တွေက ဘာလဲ?
လစဉ်ငွေတောင်းခံလွှာ များအား ဒီဂျစ်တယ်နည်းလမ်းများဖြင့် ရယူခြင်းဖြင့် ယခင်စာရွက်ငွေတောင်းခံလွှာများထက် ပိုမိုစောလျင်စွာ နှင့် အချိန်မှန် လက်ခံရရှိနိုင်ခြင်း
ဒီဂျစ်တယ်ငွေတောင်းခံလွှာတွင် သုံးစွဲသူများအနေဖြင့် မိုဘိုင်းဖုန်း (သို့မဟုတ်) ကွန်ပျူတာထဲတွင် အလွယ်တကူ သိမ်းဆည်းနိုင်ခြင်း၊ ငွေပေးချေမှု နှင့် အထောက်အထားများ အတွက်အသုံးပြုရန် အဆင်ပြေခြင်း
E-invoice လက်ခံ ရယူလိုသော ဖုန်းနံပါတ်နှင့် Email လိပ်စာ များအား အောက်ပါ နေရာ ၃ ခုအနက် ကြိုက်နှစ်သက်ရာနေရာတွင် စာရင်းပေးသွင်းနိုင်ပါသည်။
၁။ သုံးစွဲသူ ကိုယ်တိုင် စာရင်းပေးသွင်းရန် ဤ နေရာ ကိုနှိပ်၍ လည်းကောင်း
၂။ မိမိနှင့် နီးစပ်ရာ MPT ၏ ငွေလက်ခံကောင်တာ (TRA/Commercial Office ရုံး) များတွင်လည်းကောင်း
၃။ Call Center (၁၀၆) (သို့) ဝ၁- ၂၃၉၉၁၀၆ ကို ဖုန်းခေါ်ဆို၍သော်လည်းကောင်း စာရင်းပေးသွင်းနိုင်ပါသည်
သံရုံးနှင့် အစိုးရအဖွဲ့အစည်းများ၊ ကုမ္ပဏီဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်း (B2B) များမှ E-invoice လျှောက်ထားလိုပါက ဘာတွေလိုအပ်ပါသလဲ?
သံရုံးနှင့် အစိုးရအဖွဲ့အစည်းများ ၊ကုမ္ပဏီဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်း (B2B) များသည် သက်သာခွင့်အား ခံစားရရှိမည် မဟုတ်သော်လည်း E-invoice အား လျောက်ထားလိုပါက လစဉ်ငွေတောင်းခံလွှာ လက်ခံရယူမည့် ဝန်ဆောင်မှု နံပါတ်၊ SMS ရယူမည့် မိုဘိုင်းလ်ဖုန်းနံပါတ် ၊ Email လိပ်စာများနှင့် E-invoice ရယူလိုကြောင်းကို မိမိအဖွဲ့အစည်း၏ လျောက်ထားစာတွင် သေချာစွာ ဖော်ပြပြီး နီးစပ်ရာ TRA ငွေသွင်းကောင်တာ များ နှင့် Commercial ရုံးများတွင် လျောက်ထားနိုင်ပါသည်။
E-invoice စာရင်းပေးသွင်းရန်လမ်းညွှန်>>> Click
၁။သုံးစွဲသူ ကိုယ်တိုင် ဘယ်လိုစာရင်းပေးသွင်းနိုင်မလဲ?
MPT မှ သုံးစွဲသူများထံ တိုက်ရိုက်ပေးပို့သော SMS နှင့် Email များတွင် ပါရှိသည့် Self Register link များမှ တဆင့် လည်းကောင်း၊
သို့မဟုတ် ဤ နေရာ ကိုနှိပ်ပါ။
၂။စာရင်းသွင်းဖို့ ဘာတွေ လိုအပ်ပါသလဲ?
စာရင်းသွင်းရန် အောက်ပါတို့ကို ဖြည့်သွင်းရပါမည်။
စာရင်းပေးသွင်းလိုသည့် ၀န်ဆောင်မှုအမျိုးအစား (Service Type)
စာရင်းပေးသွင်းလိုသည့် ၀န်ဆောင်မှုနံပါတ် (Service Number)
ငွေစာရင်းအမှတ် (Account Code)
SMS ဖြင့် ရယူလိုပါက လက်ခံရယူလိုသော မိုဘိုင်းလ်ဖုန်း နံပါတ် (ဖုန်းနံပါတ် ၂ခု အထိ ပေးသွင်းနိုင်ပါသည်)
Email ဖြင့် ရယူလိုပါက လက်ခံရယူလိုသော အီးမေးလ်လိပ်စာ (အီးမေးလ်လိပ်စာ ၂ခု အထိ ပေးသွင်းနိုင်ပါသည်)
(၀န်ဆောင်မှု အမျိုးအစား၊ ၀န်ဆောင်မှု နံပါတ်၊ ငွေစာရင်းနံမှတ် များကို သိရှိလိုပါက လစဉ်ကျသင့်ငွေတောင်းခံလွှာ စာရွက်တွင် စစ်ဆေးကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။ သို့မဟုတ် ၁၀၆ သို့ ဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်ပါသည်။)
၃။Discount အစီအစဉ် ရှိပါသလား?
MPT အနေဖြင့် ငွေတောင်းခံလွှာစာရွက်မသုံးစွဲတော့ဘဲ ယခုအစီအစဉ်တွင် ၅ လဆက်တိုက် ပူးပေါင်းပါဝင်သော တစ်ဦးချင်း သုံးစွဲသူများအတွက် ၂၅၀၀ ကျပ် (လစဉ် ၅၀ဝ ကျပ်) အား လူကြီးမင်း စာရင်းပေးသွင်းသော ငွေတောင်းခံလွှာ ပေါ်တွင် သက်သာခွင့်ပေးမည် ဖြစ်ပါသည်။
၄။Discount ရယူရန် ဘယ်လိုဆောင်ရွက်ရမလဲ?
သုံးစွဲသူများအနေဖြင့် e-invoice နှင့်အတူ Discount ရယူခံစားလိုပါက အောက်ပါအတိုင်း လုပ်ဆောင်ရမည် ဖြစ်သည်။
၁) သုံးစွဲသူ ၏ အချက်အလက်များ ကို စာရင်းသွင်းရပါမည်။ Email ဖြင့်လက်ခံရရှိလိုပါက email လိပ်စာအား လည်းကောင်း SMS ဖြင့် လက်ခံရရှိလိုပါ မိုဘိုင်းဖုန်းနံပါတ်အား လည်းကောင်း စာရင်းပေးသွင်းရမည် ဖြစ်ပါသည်။
၂) ထို့နောက် “I would like to receive e-invoice via the contact information that I have provided and agree to discontinue paper invoice” ကို အမှန်ခြစ် ခြစ်ရမည်ဖြစ်သည်။
Discount အားခံစားခွင့်ရယူရန်အတွက် ရရှိလာသော email နှင့် SMS ကိုအတည်ပြုပေးရမည်ဖြစ်ပြီး ဝန်ဆောင်မှုစည်းမျဥ်းအတိုင်း အကျုံးဝင်မည်ဖြစ်သည်။
၅။ E-invoice ရယူပြီး ဘယ်လို ငွေပေးချေနိုင်မလဲ ?
ငွေပေးချေမှုအား နီးစပ်ရာ MPT ၏ ငွေလက်ခံကောင်တာများ၊ စာတိုက်များ၊ ဘဏ်များဖြစ်ကြသည့် (KBZ/CB/AYA) ဘဏ်များ၊ MPT GSM ငွေဖြည့်ကဒ်ဖြင့် ပေးချေမှု နှင့် MPT မှသတ်မှတ်ထားသော တယ်လီဖုန်းဌာနများတွင် ပေးဆောင်နိုင်ပါသည်။